I-china FR4 94v0 SINGLE-SIDED ENIG CIRCUIT BOARD PCB FAST PROTOTYPE PANEL PCB BOARD MANUFACTURING FACTORY IN CHINA abakhiqizi nabaphakeli | PhiliFast
Usayizi we-PCB: 50 * 80mm Isikrini sesilika: Mhlophe
Yimaphi amafayela adingekayo ukukhiqiza ama-PCB akho:
1. Amafayela e-PCB (Amafayela amaGerber).
2. Inani elithile.
3.Ukuqina kwe-PCB, Izinto, ukujiya kweCopper, ukuphela kwe-Surface, umbala we-Solder mask noma ezinye izidingo.
Ngomhlangano we-PCB, amafayela amaningi ayadingeka njengoba kungezansi:
1.Uhlu lweBom (isikweletu sokwaziswa)
Amafayela we-Centroid (Amafayela we-Pick & Place)
3. Imidwebo yomhlangano,
4. Imfuneko eyengeziwe yokuhlangana.
ENIG (Ukucwiliswa Igolide):
Inqubo yokucwiliswa yegolide ifaka i-nickel- enamathela ngegolide enombala ozinzile, ukukhanya okuhle, ukumboza okuyisicaba nokuthengisa kahle ebusweni besekethe ephrintiwe, izindleko zibiza kakhulu.
HASL (Lead Mahhala):
I-flatness ayanele, kepha i-HASL ibiza kancane. Ngenxa yezidingo zokuvikelwa kwemvelo, kunesidingo sokuhola mahhala.
Inqubo ye-HASL (Lead Free) isetshenziswa kakhulu ngamakhasimende.
Mboza ungqimba lwefilimu evikela i-anti-oxidation ebusweni bethusi, ubukhulu befilimu bufana, izindleko ziphansi, kepha kunzima ukumelana nokufaka okwehlukahlukene.
1. Yehlisa izindleko zakho:Umhlangano we-Turnkey PCBA; Isixazululo se-BOM sokunciphisa izindleko; Iseluleko Sobungcweti Sokusebenziseka Kwakho Kwedizayini.
2. Ukuqinisekiswa Kwekhwalithi:I-ISO14001, IATF16949, i-UL isitifiketi; I-100% AOI / E-Testing / X-ray / Software Programming and Function Test Iyasekelwa.
3. Ngokulethwa kwesikhathi:Ukuvuselelwa Kwesimo Sesikhathi Sangempela; Inqubo Yokukhiqiza Esobala Isinyathelo; 99% Ku- Isikhathi sokuthumela nge-DHL / UPS / FeDex / TNT.
4.Isevisi Enhle Yekhasimende:Amahora angama-24 aku-inthanethi; Ngesikhathi Esizayo- ukuthengisa Impendulo Emahoreni ayi-12; Ukusekelwa Kwezobuchwepheshe Kwezobuchwepheshe.
Sithumele ama-PCBs iminyaka engaphezu kweyishumi, sisekela kokubili ukukhiqiza nokukhiqiza ngobuningi.
1. 1- 32 Layer PCB Production (Ayikho i-MOQ.) FR-4, ibhodi le-FPC, ipuleti le-Aluminium, ithusi elisindayo, i-HDI.
2. Izingxenye Zokuhlwaya.
3.I-Quick-turn Prototype ne-SMT & THT Assembly enekhwalithi ephezulu.
4. Precision Metal Izingxenye Machining.
Ukubalwa Kwesendlalelo Izingqimba 1- 32
Izinto Eziyisisekelo FR- 4, Polyimide, Metal base (Aluminium, Ithusi), High Frequency (Rogers, Teflon, PTEE), Hybrid, njll
Uhlobo lwe-PCB FR- 4 PCB Ngesandla Esiqinile, Aluminium PCB, PCB yethusi-based, HDI, FPC, Ngesandla Esiqinile- Flex PCB, High- Frequency PCB, Rogers PCB, obukhulu Ishidi PCB, PCB Halogen- Mahhala, njll
Ubukhulu be-PCB 0.1mm- 10mm
Ubukhulu Bethusi 1 / 2oz-6oz (18um-210um)
Usayizi webhodi 500mm * 1500mm
Ukulandelela okuncane / Isikhala 0.075mm / 0.075mm (3mil / 3mil)
Min ukubhola Hole Mechanical imishini: 0.15mm (6mil), Laser imishini: 0.1mm (4mil)
Isifihla Solder Green, Matt Green, Black, Math Black, White, Red, Yellow, Blue, Purple, njll
Umbala wesikrini Mhlophe, Luhlaza, Mnyama, Bomvu, Mthubi
Surface sekugcineni I-HASL (Ehole- mahhala), Ukucwiliswa Igolide (ENIG), Ukucwiliswa Tin, Ukucwiliswa Isiliva, i-OSP, uwoyela weCarbon, njll.
Amasu Akhethekile Ukulawulwa kwe-Impedance, iminwe yegolide, i-vias PCB eyimpumputhe / engcwatshiwe, imaski ye-solder ebonakalayo, Izimbobo ezinesiqingatha, i-Via- in- Pad ne-Countersink hole, njll.
Uma udinga ukwenza isibonelo nge-PCB yakho, ama-Pls athumela amaFayili akho e-PCB (amafayela weGerber) ku ukuthengisa @I-fljpcb.com
I-PHILIFAST inikela ngamabhodi amasekhethi we-PCB asezingeni eliphakeme kanye nensizakalo yomhlangano we-SMT, ithimba lethu lochwepheshe elisebenza ngobuchwepheshe lisebenzela izinkulungwane zamakhasimende ezivela kuwo wonke umhlaba, Noma ngabe i-oda lesampula noma ama-runs amaningi okukhiqizwa kwevolumu, silwela ukwanelisa amakhasimende ethu ngamunye futhi sinikeze amakhasimende ethu isipiliyoni sokuthenga esihle kakhulu.
Futhi, sigxila kusevisi ye-turnkey ukusiza amakhasimende ukuhlanganisa yonke iphrojekthi.
Amathegi ashisayo: i-prototype esheshayo, iphaneli ye-pcb, i-pcb eyodwa-emaceleni, abakhiqizi be-pcb, abahlinzeki, ifektri, okwenziwe ngokwezifiso, ukuthenga, ikhotheshini, inani eliphansi, elenziwe eChina, ibhodi ye-Impedance pcb, i-ENIG, i-HASL, i-OSP, i-pcb ye-pcb, insiza ye-pcb turnkey , amafayela e-pcb, iGerber, i-BOM, ukuqeda indawo, ikhwalithi ephezulu.
Langaphambilini I-ELECTRONIC PCB EXPRESS SERVICE FR4 CIRCUIT BOARD FABRICATION DOUBLE-SIDED RED SOLDER MASK IMMERSION GOLD PCB BOARD NGEQEMBU ELIPHAKEME
Olandelayo: SHENZHEN HIGH QUALITY FR4 ELECTRONIC CIRCUIT PCB Manufacturer FR4 MATERIAL PCB CUSTOM FABRICATION WITH UL ROHS CERTIFICATE
Electronics PCB EXPRESS SERVICE FR4 WESIFUNDA BOAR ...